Madaxweynaha Tanzania oo Talaadada imaanaysa Kenya | Star FM
Home Wararka Kenya Madaxweynaha Tanzania oo Talaadada imaanaysa Kenya
Madaxweynaha Tanzania oo Talaadada imaanaysa Kenya
Afhayeenka madaxtooyada dalka ee State House Kanze Dena Mararo ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in maalinka Talaadada 4-ta bishan Shanaad ay wadanka booqasho rasmi ah ku imaan doonto madaxweynaha dalka Tanzania Samia Suluhu Xasan.
Labo cisho ayay hoggaamiyaha Tanzania ku sugnaan doonta Kenya.
Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa ku soo dhaweyn doono madaxtooyada .
Mrs. Dena ayaa intaasi ku dartay in faahfaahin dhameystiran oo ku qaaddan booqashada Samia Suluhu Xasan dib laga soo sheegi doono.
Previous articleIsmaamulka Kajiado oo lagu abuuraya 2 milyan oo geedo ah
Next articleDHAGEYSO:Senatarka Siaya oo sheegay in la ansaxin doono qorshaha BBI